NUGEN Manolotra Plug-Ins ho an'ny horonam-peo tsy misy fehezina ho an'ny tetik'ady mozika sy fahitalavitra - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » NUGEN Manolotra Plug-Ins ho an'ny horonam-peo tsy misy fehezanteny ho an'ny mozika sy fahitalavitra
NUGEN Manolotra Plug-Ins ho an'ny horonam-peo tsy misy fehezanteny ho an'ny mozika sy fahitalavitra
Los Angeles, NOVEMBER 7, 2019 - Amin'ny maha marika rindrambaiko fanovana audio am-peo ho an'ny mpanentana fahitalavitra sy mpamokatra mozika sy mpamokatra manerana izao tontolo izao, NUGEN Audio dia nahazo laza lehibe tao amin'ny orinasa. Rehefa nahazo kopie ny mpamokatra Producer Jorel Corpus ny Mix Engineer Jorel Corpus tamin'ny hetsika iray manodidina ny GRAMMY dia tsy ela dia tsapany fa io no famenoana tanteraka ny fantsom-pifandraisana efa misy azy noho ireo karazan-mozika sy fahitalavitra.
Nanazava i Corpus fa talohan'ny nandraisany ny rindrambaiko dia efa nandre zava-dehibe momba ny NUGEN izy ary, taorian'ny nampiasany ny plug-ins dia nahatsapa vetivety ny faran'ny tombontsoa ho an'ny vahaolana. "Betsaka ny namana namana sy mpiara-miasa izay atokisako no mampiasa NUGEN," hoy izy. “Naniry ny vahaolana ho an'ny orinasa nandritra ny fotoana kelikely aho, ka rehefa nahazo ilay fonon'ilay Produser aho dia fotoana tonga lafatra izany. Vao nanomboka nampiasa NUGEN aho dia nahatsapa toky kokoa. Mampiasa plug-in ny Visualizer audio rehefa mandefa rakitra aho hanadihady avy hatrany raha toa ka mijanona amin'ny mono na stereo ny famantarana. Ity dia manomana ny loharanon-karena ary mampandeha tsara ny fidiram-bolako. Ampiasaiko tsy tapaka ny fitaovana Stereoizer sy Stereoplacer. ”
Ho fanampin'ireo plug-in hita ao anaty fonosan'ny Producer, ny Corpus dia efa nahazo ny NUGEN's Loudness Toolkit NUGEN miaraka amin'ny metimety be VisLM, izay manampy azy hahay hankatò rehefa miasa amin'ny sehatry ny fahitalavitra sy tetikasa-fitakiana. "Hitako fa ny limiteran'ny stereo ISL dia miasa tsara amin'ilay metim-pandrosoana VisLM," hoy izy nanampy. "Ny ISL dia manome ny mangarahara True Peak izay mametra ny atiny amin'ny stereo sy mono. Taloha, miaraka amin'ireo vokatra mpifaninana, dia hanahy ny hampientana ahy aho. Miaraka amin'ny NUGEN, dia tsy mieritreritra izany akory ianao. Ny fampiasana plug-in NUGEN dia ahafahako manao Netflix, Amazon Prime na fahitalavitra izay manana fepetra takiana mafy.
Hatramin'ny nampidirany ny lozisialy NUGEN ho ao amin'ny toeram-piasana i Corpus dia nahita ny tenany nanolo ireo plug-in izay ampiasainy teo aloha. "Na dia manana fitaovana mitovy amin'izany aza ianao, dia mitovy amin'ny fomba fiasa avo kokoa," hoy izy. “Heveriko fa ny lozisialy NUGEN dia sosona farany amin'ny famokarako. Rehefa te-ho azo antoka izay ataoko dia mifanaraka amin'ny NUGEN aho. ”
Ho fanampin'ny vokatra azony, Corpus dia faly koa amin'ny serivisy sy ny fanohanana izay azony avy amin'ny ekipa NUGEN Audio. "NOVO dia manana laza tsara ary ny fifandraisako amin'izy ireo isaky ny mila manatrika aho dia mahafinaritra," hoy izy nanohy. “Mampahery ny mahafantatra fa tena manampy olona tahaka ny tenako, izay miasa amin'ity orinasa adala ity ny NUGEN. Ny vokatra avy amin'izy ireo dia manamboatra ny fizotran'ny asa ataontsika mba hahamora kokoa azy ireo ary tsy dia mieritreritra sy tsy hampanahy intsony isika. Tena mahafaly ny mahafantatra fa manana mpiara-miasa aminay eo an-jorony izahay. ”
Corpus dia Grammy- ary Billmy voamarina #1 nanome mpamokatra mozika, injeniera feo sy mpanakanto mozika fantatra amin'ny asany tao Etazonia sy Azia, izay ahitana fampisehoana an-tsary Brandy, Tyrese, Boyz II, JJ Lin, GEM ary Disney. Amin'ny lafiny famokarana amin'ny fahitalavitra, misy ny fanomezany antoka The Andro manala ao amin'ny Amazon prime ary Fianakaviana, seho fisakafoanana any Azia izay navoaka teo ambanin'ny YOMYOMF an'i Justin Lin sy i Warner Bros. Stage 13 Platfrom,; ary koa tetikasa isan-karazany ho an'ny sarimihetsika Windy, masoivoho famokarana famoronana izay nahazo ny AdWeek ARC Award vao haingana. Miara-miasa amin'ny Indie Pop Films ihany koa izy, trano famokarana fampiasa mivantana sy fampitsaharana hetsika mihetsika izay efa nahazo mari-pankasitrahana ary voafidy ho an'ny festival festival iraisam-pirenena.
Ny fampahalalana momba ny fatotra mpamokatra NUGEN, miaraka amin'ny fianakaviana vokatra NUGEN Audio dia azo alaina ao www.nugenaudio.com. Ho an'ny fanontanianao hafa, azafady mailaka [mailaka voaaro].
Ny NUGEN Audio dia mpanamboatra fitaovam-pitaovam-baovaon'olon-tsotra sy mavitrika izay manome ny vahaolana avoakan'ny fampielezam-peo sy ny endriky ny famokarana mba hanamafisana ny fanamafisana sy fanamafisana ny fanamafisam-peo, ny fametrahana, ary ny fanitsiana avy amin'ny fanangonam-baovao amin'ny alalan'ny playout. Rehefa misaintsaina ny zava-misy momba ny famokarana manerantany ao amin'ny ekipa NUGEN Audio, ny vokatra ao amin'ny orinasa dia manamora ny famoahana feo avo lenta sy mifanaraka amin'ny faharetan'ny fotoana, ny fampihenana ny fandaniana ary ny fitehirizana ny fizotry ny famoronana. Ny fitaovana elektronika NUGEN ho an'ny fanadihadiana an-tambatotra, ny famahanana feo, ny fampifangaroana / ny fanaraha-maso, ary ny fanaraha-maso dia ampiasain'ireo anarana ambony indrindra eran-tany amin'ny fampitana, ny famokarana, ary ny famokarana mozika. Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho www.nugenaudio.com.
Araho NUGEN Audio:
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie Audio Plug-in fampitana injeniera fampitana Engineering Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia fanovana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor NUGEN Audio Fampitana Outside kamiao lahatsoratra famokarana SJGolden - Spears & Arrows The Colonie Ny Colonie - News THE COLONIE / Chicago TV Technology TVU Networks Video injeniera	2019-11-08
Previous: PMC dia manendry Studios varotra amin'ny maha-mpizara azy Thailandey ho an'ny rehetra Pro Monitor
Next: Mpanokana momba ny kisary - Lohataona aloa, 2020 Internship